Xalwo - Gpedia, Your Encyclopedia
Xalwo (Af carabi: حلاوة طحينية; Af Ingiriis : halva) (sidoo kale loo yaqaano Xalwad) waa nooc ka mid ah cuntada fudud ee laga cuno meelo badan oo caalamka ah, gaar ahaan Soomaaliya, Bariga Afrika, Bariga Dhexe, iyo meelo kale. Ereyga xalwa wuxuu ka yimid luuqada Carabiga (Af carabi: حلاوة ḥalāwah / حلوى ḥalwá), taasi oo ah iskuqas laga sameeyay noocyo kala duwan oo la isku kariyo. Xalwadu waa mid macaan isla markaana leh midabo kala duwan. Guud ahaan xalwada caalamka nooc kasta oy tahay waxay ku salaysan tahay labo nooc:
Si la mid ah xarfo iyo magacyo badan oo luuqada Af Soomaaligu ka soo amaahday luuqadaha caalamka, gaar ahaan Carabiga, ayaa ereyga Xalwa wuxuu inaga soo galay deegaanada Carabta. Ereyga xalwa wuxuu ka yimid luuqada Carabiga (Af carabi: حلاوة ḥalāwah / حلوى ḥalwá) taasi oo la aaminsan yahay ineey aduunyada ku fiday qiyaastii 1840kii ilaa 1850kii. Sidoo kale ereyga xalwa (حلو ḥelw) micnaheeda Af Carabigu waa "macaan".
Xalwada Daqiiqda Ka Samaysan